Izindaba - Kungani imishini yokudonsa uzipho ithandwa kangaka?
Imishini yamadonki kaClaw nazo zonke izinhlobo zemishini yezipho ezithengiswayo manje cishe sezikhona yonke indawo. Ngaphezu kwezitolo zomshini wonodoli, basezitolo zezitolo, eceleni kwezindawo zokubukela amabhayisikobho, emaphaseji ezitolo zezingubo zezingane noma ezitolo zokudlela, nasemnyango wezitolo ezinkulu zezitolo.
Hlobo luni lwabathengi yilabo abathola umshini kadlaw uzipho?
Kungani bekhetha umshini we-claw doll? Yini ebenza bazimisele ukuqhubeka nokuphonsa imali?
Njengoba sonke sazi, abesifazane abasebancane nezingane zingamaqembu amakhulu abathengi bemishini yozipho. La maqembu womabili abadlali angabamaqembu wabathengi angenangqondo. Kulula ukudlala imishini yodoli ngenxa yalezi zinhle, ezithandekayo. Ngaphezu kwalokho, emphakathini wanamuhla, ijubane lempilo liyashesha, nesikhathi sabantu sihlukaniswa. Umshini wodoli weClaw uyindlela ehlakaniphile yokusebenzisa isikhathi esihlukanisiwe sabantu abalindile, abalinde izimoto, njll, ukuze abathengi bakwazi ukuthola ubumnandi esikhaleni sesikhathi. Ngakho-ke, imibhangqwana, umndeni, abesifazane abasebasha namanye amaqembu angabanikazi abavamile bemishini yonodoli. Kungukhiye ukuheha abantu abasha ukuthi bahambisane nomkhuba, baqonde umhlobiso wesitolo, futhi basebenzise umhlobiso wesitolo sangaphakathi ukwenza abathengi bathathe izithombe basakaze, bese benza ukusakazwa kwesibili
Lapho umngani womfana ofuna ukukhombisa intelezi yakhe ebona ukuthi intombazane ayithandayo ifuna unodoli emshinini wonodoli, umfana uzozinikela ukufaka imali yokubamba lo doli. Isizathu silula, ukukhombisa nje amandla akhe okubamba unodoli. Uma ubheka onodoli abangaphakathi komshini wonodoli, hambisa izinzipho ngokucophelela, kungasaphathwa ukuthi awukwazi ukubamba unodoli. Yilo mzamo oqotho kuphela ongadonsela amantombazane.
Uma ukudonsa iso kungukuqala, khona-ke unodoli ungumongo womshini uzipho, engikholelwa ukuthi sonke siyaqonda. Unodoli omuhle futhi omusha, kufanele athandeke, ikakhulukazi ezinganeni nasemantombazaneni. Ezinye izipho ezinhle, noma ezinhle, noma ezinhle, noma ezifake imfashini, zivumela wonke umuntu afune ukuzithola
Vele, i-IP ethandwayo nayo iyisinqumo esisha. Njengoba sonke sazi, i-IP eshisayo ilandelwa inani elikhulu labalandeli. Ukwethulwa kwemikhiqizo edumile yomngcele we-IP ngokwemvelo kuzoheha abathengi abaningi
Kubathengi, ukudlala umshini wedoli kungaletha umuzwa wenjabulo nokuqabuleka njalo. Intsha eningi ibheka lo mdlalo njengendlela yokukhipha ingcindezi. Konodoli, ubuhle bezipho kungumkhiqizo wokuqala wokuheha abathengi. Ngakho-ke, imikhiqizo yokuqukethwe yomshini wedoli idinga ukuvuselelwa njalo. Okwamanje, imikhiqizo ejwayelekile ivela kokuvela kwamasiko nobuciko, njengonodoli abasezingeni eliphakeme. AmaJapan aqhamuke nomshini wezinzipho zegem, umshini wekhekhe uzipho, nomshini wezinzipho zezicathulo, okuqhubeka nokwandisa inani labasebenzisi